Incazelo. Izinto zesimanje 14-storey esakhiweni eyinkimbinkimbi Holiday Inn Sharjah 5 lakhiwa ngo-1980 abahlala engxenyeni ephakathi ye-resort of Sharjah kwemizuzu engu-10 esikhumulweni sezindiza. Ihhotela eseduze bonke ezikhangayo emikhulu yedolobha. Budebuduze zomzimba ziyinkimbinkimbi ngendlela Oceanarium, izitolo zokuthengisa ezinkulu, emakethe igolide, iNational Park, izindawo zamabhizinisi kanye amathilomu ezishibhile.
I Holiday Inn is owned uchungechunge «Holiday-Inn Hotels & Resorts», okuyinto idume isevisi ngendlela enhle kakhulu. Ihhotela has konke okudingayo ukuze ube izinga namaholidi ekhululekile. Ukuze izivakashi kukhona inkonzo Shuttle kuya / kusuka esikhumulweni sezindiza futhi ebhishi edolobheni. Ngisho ngaphandle kokuya ngaphandle kwendlu isivakashi, amaklayenti uzokwazi nijabula, esebenzayo futhi ezithakazelisayo ukuchitha isikhathi ebhukuda pool, badlala imidlalo, ubuke ama-movie sidlale nemidlalo endaweni ejimini ukhululekile.
olunezinombolo Isikhwama. Ihhotela Holiday Inn Sharjah 5180 amakamelo: Suite, Single-Bedded, kabili Bedded. The main ingxenye amakamelo nge ukubukwa-panoramic phezu enkabeni yedolobha. Inikeza imibhede rollaway ezengeziwe. Nsuku zonke uzothola inkonzo izinga nokuguqulwa zokulala. It unikeza komuntu siqu-air-conditioning, satellite TV, amaphephandaba khulula ne-inthanethi.
Kukhona socingweni, ibha ngamanzi khulula amaminerali, iketela kagesi, izitsha, imishini ayina, umshini ikhofi kanye ephephile. Indlu yangasese yangasese has a bidet, okugeza zosizo, izikali, futhi izinwele dryers. Uma wayefisa, amakhasimende oda ikamelo inkonzo.
Amandla. Kuye isikhathi sokuhlala kwenu, ungakhetha uhlelo ezifanele ukudla: BB, HB, FB. I Holiday Inn Ihhotela Sharjah 5 ukudla yohlobo "lezitsha". Kumiswa yokudlela omkhulu kusuka 6 am kuya 11 ekuseni ekuseni ukudla. Iziphuzo kungukuthi emananini Imininingwane. Imenyu ekhethekile iyatholakala izingane ezincane.
Izivakashi angakhetha zokudlela eziningana zamazwe ngamazwe, international, Iranian futhi cuisine Mexican, kanye nemigoqo nezindawo zokudlela ezinhle, lapho anhlobonhlobo izitsha ahlukahlukene, ehla Ungadla.
Beach. Mayelana 3 km kusukela ehhotela Holiday Inn Sharjah 5 kuyinto sandy beach yomphakathi. Izivakashi ongafinyelela ke ngumuntu khulula Shuttle ibhasi (ukuze / nasemuva). Beach - kwi Izibuyekezo lezihambi - ahlanzekile, inakekelwa kahle futhi amadoda. Ephambi kwezinduna lolwandle izindawo, izihlambi, amanzi ezemidlalo cafe.
Imininingwane engeziwe. Ophahleni isakhiwo hhotela ichibi ongaphandle nge ukubukwa edolobheni. Eyesibili pool zasendlini ngqo emzimbeni, kuba evuthayo. Ezinganeni egqanyisiwe endaweni echibini omdala. Futhi izingane kukhona club encane, lapho izingane zingaba nobumnandi futhi ulwazi bachitha isikhathi. Ukusiza abazali ngamasevisi kwabahlengikazi professional, abanakekela ingane ngesikhathi wena away.
Ngezamabhizinisi uyojabula amakamelo amathathu umhlangano nge umthamo esiphezulu lezihlalo 800. Ukuze amaqembu amancane kukhona amakamelo encane nge amatafula nxazonke, kuyoba esikahle futhi zikhululekile ukuze babambe izingxoxo futhi imihlangano.
Ezemidlalo nokungcebeleka: isikhungo ukuqina, salon kahle, massage, sauna, ithenisi enkantolo, squash enkantolo, igumbi Billiard. Ihhotela has a yokupaka izimoto (mahhala izivakashi), uMnyango ilondolo / zokuhlanza owomile, izitolo Guqula lento.
Digest. Ukuphupha we ukuphumula okuhle futhi emsebenzini endaweni emnandi hhayi overpaying imali yokuphephisa? Khona-ke ukwamukela ihhotela Holiday Inn Sharjah 5. Izibuyekezo lokhu B & B kule main omuhle. Ihhotela Auditorium kuyinto 50% ngezamabhizinisi kanye imibhangqwana induduzo ezibalulekile, lula futsi wabaniketa kuthula kwengcondvo.
Izivakashi zehhotela ukudla ngempela ezihlwabusayo: imenyu amakhono ehlukene kanye nama-dessert ukuthi zinzima ukuwenqaba. Ejatshuliswe amakamelo ahlanzekile, Tastefully ehlotshisiwe, ngamunye wabo izinto ezidingekayo kanye nemishini. okubuyayo emsebenzini abasebenzi - ukwelashwa friendly futhi ahloniphe wonke amakhasimende, ikakhulukazi ezinganeni. Lapha singalazisa zonke izivakashi.
Natalie Resort 3 * (Kata Beach, Thailand): incazelo, ukuphumula
Ihhotela "eScandinavia" (Sestroretsk): Ikheli, ukubuyekezwa
Wezingane kanye nengane izingubo Isitolo esidayisa yonke impahla: Fashion Amathrendi Fall Amaqoqo